यस कारण अर्जुन घिमिरे (पांडे) सक्किगोनी मा देखिएका छैनन् ! - Abhiyan news
१२ भाद्र २०७८, शनिबार ०२:१८ अभियान न्यूजLeaveaComment on यस कारण अर्जुन घिमिरे (पांडे) सक्किगोनी मा देखिएका छैनन् !
तपाईंहरूको सक्किगोनि पनि भित्रभित्रै त फुटेको त हैन ? अर्जुन घिमिरे पाँडे नभएको सक्किगोनि पनि सक्किगोनिझैं भएको छ। हामीलाई पाँडे जसरी नि चाहियो।’पाँडे खोई चाइयो, नुनबिनाको तरकारीजस्तै भयो सक्किगोनि।’
अर्जुन लामो समयदेखि सक्किगोनि नदेखिनुको कारण भने पिडादा’यी छ। झन्डै तीन महिनादेखि आमा अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका कारण उनी पीडामा छन्। आमालाई म’स्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना गरिएदेखि सक्किगोनिका मुख्य कलाकारमध्येका एक अर्जुन घिमिरे त्यसमा देखिएका छैनन्।
सधैं उनको पर्खाइमा टेलिभिजन अगाडि रहने दर्शक भने महिनौंसम्म उनीलाई नदेख्दा निराश भइरहेका छन्। दर्शकलाई सधैं हँसाइरहने उनै अर्जुनका अगाडि भने यतिबेला आमा बिरामी भएका कारण दुःखको पहाड उभिएको छ। आमालाई मस्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना गरिएको कारण पाँडे बुढा सिरियलबाट टाढा रहेर आमाप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन्।
अर्जुन हिजोआज ग्रिन सिटी अस्पतालमा अचेत अवस्थामा उपचाररत आमाको स्याहार—सुुसार र त्योभन्दा बढी चिन्तामा छन्। मम्मीलाई ब्रेन ह्याम्ब्रेज भएको लामो समय भइसकेको छ, तर पनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउने आशामा अस्पताल परिसरको चक्कर काटिरहेको छु।
सुधार भने आउन सकेको छैन’ अर्जुन दुःख पोख्छन्— ‘उहाँको स्थिति क्रिटिकल नै रहेकोले ममीको यस्तो अवस्थामा मलाई सिरियलको सु’टिङमा जाने मुड नै भएन। आमालाई गाह्रो परिरहेका बेला दर्शक हँसाएर हास्य सिरियलमा खेल्ने हिम्मत ममा भएन।
त्यसकारण अहिले सिरियल छोडेर मम्मीकै हेरचार गरिरहेको छु।सक्किगोनिमा आफूलाई हेर्न प्रतीक्षारत दर्शकलाई अर्जुन आफ्नो अवस्था सहज भएपछि मात्र सिरियलमा फर्कनने बताउँछन्। अहिले म हस्पिटलमै बसिरहेको छु। मलाई दाइहरूले पनि सहयोग गरिरहनुभएको छ।
अब मम्मीको स्वास्थ सामान्य अवस्थामा आएपछि र स्थिति सहज भएपछि फेरि सक्किगोनिमार्फत दर्शकमाझ आउनेछु’ उनी भन्छन्। अर्जुन सुनाउँछन् ‘डाक्टरहरू ममीको स्वास्थ्यको खटिइरहनुभएको छ। हामी उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छौँ।
आशा छ, ममीको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। उहाँलाई होस आइहाल्छ कि भन्ने झिनो आशाका साथ हामीले उहाँ अचेत भए पनि अस्पतालमै केक काटेर उहाँको बर्थडे पनि मनायौँ। उहाँको इच्छा पनि थियो जन्मदिनको दिन केक काट्ने। तर, अस्पतालको बेडमै केक काटेको पनि उहाँले सायदै थाहा पाउनुभयो।’
उनले थपे— ‘ममी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्न तीन महिनादेखि ग्रिन सिटी अस्पतालमा संघर्षरत हुनुहुन्छ। भगवान् छन्, छैनन्, त्यो त थाहा भएन। यदि, छन् भने हाम्रो पुकार सुनेर आमालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिनोस्। हामी यही एउटा जी’वित आशा बोकेर उहाँलाई कुरिरहेका छौं।’
नेपाल समाचारपत्र बाट
तेक्वान्दो खेलाडी दीपिका कार्कीको निधन
बहुविवाहका अभियुक्त १३ वर्षपछि पक्राउ, श्रीमानश्रीमती जेल चलान
बन्द हुने भयो, ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:१७ अभियान न्यूज
वामदेवको शब्दमा चुनावी गीत ‘जनता जगाउने कलममा छाप लगाउने’ सार्वजनिक
२१ बैशाख २०७९, बुधबार ०३:०८ अभियान न्यूज
दुर्गेश थापाले भने गीत बहिष्कार गर्दिनुहुन्छ भने गर्दिनुस्
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १४:२३ अभियान न्यूज